Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်)
Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
မက်ထရီဖိုနိတ် ကို အဓိကအားဖြင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ကပ်ပါးပိုးဝင်ခြင်းနှင့် အယ်လ်ဇိုင်းမား မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းသည့်ရောဂါများကို ကုသရန် အသုံးပြုကြပါသည်။
Metrifonateကို အဓိကအားဖြင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ကပ်ပါးပိုးဝင်ခြင်းနှင့် အယ်လ်ဇိုင်းမား မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းသည့်ရောဂါများကို ကုသရန် အသုံးပြုကြပါသည်။
Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Metrifonate ကို အလုံးလိုက်မြိုချပါ။ မဝါးရ၊ မချေရ။
Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Metrifonate ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Metrifonate ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Metrifonate မက်ထရီဖိုနိတ်ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Metrifonate မက်ထရီဖိုနိတ် ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Metrifonate ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Metrifonate မက်ထရီဖိုနိတ် ဆေးနှင့် ကုသမှုခံယူထားသောသူများသည် ဆေးမသောက်မီ နှင့် သောက်ပြီး ၄၈ နာရီအတွင်း အာရုံကြောနှင့် ကြွက်သားဆိုင်ရာ ဆေးတမျိုးဖြစ်သော suxamethonium ကို မသောက်ရပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Metrifonate ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့မှာ
Acetylcholine ဓါတ်ထွက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော လက္ခဏာများဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Metrifonate မက်ထရီဖိုနိတ် ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Metrifonate က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Metrifonate မက်ထရီဖိုနိတ် ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြးီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 7.5-10 mg/kg
တနေ့ ၃ကြိမ် ဖြစ်သည်။
၄၀-၈၀ %သောသူများသည် ၂ ပတ်အကြာတွင်ပျောက်ကင်းကြသည်။
ကလေးတွေအတွက် Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
(သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။)
Metrifonate (မက်ထရီဖိုနိတ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Metrifonate ကို 100mg ဆေးပြားအနေနှင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Metrifonate ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Metrifonate. http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2922e/3.7.2.html. Accessed December 1st, 2016
Metrifonate.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16625573. Accessed December 1st, 2016.
Metrifonate.http://www.rxwiki.com/metrifonate. Accessed December 1st, 2016.